ဖိုင်ဘာလေဆာအမျိုးအစား - News - Box Optronics
1. Crystal ဖိုင်ဘာလေဆာ။ အလုပ်လုပ်သောပစ္စည်းသည်လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖန်မျှင်အမျှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ပတ္တမြားတစ်မျိုးတည်းရှိသောသာမာန်ကျောက်မျက်ရတနာဖိုင်ဘာလေဆာနှင့် nd3 +: YAG တစ်ခုတည်းသောကြည်လင်ဖိုင်ဘာလေဆာတို့ပါဝင်သည်။
2. nonlinear optical fiber ကိုလေဆာရောင်ခြည်။ အဓိကအားဖြင့်လှုံ့ဆော်သော Raman ပြန့်ပွားဖိုင်ဘာလေဆာများနှင့်လှုံ့ဆော် Brillouin ပြဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်ရှိပါတယ်။
၃ ။ optical fiber ၏ matrix ပစ္စည်းများသည်ရှားပါးဒြပ်စင်အိုင်းယွန်းများကို optical fiber ထဲသို့ fiber fiber laser ဖွဲ့စည်းရန် doping ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် activate လုပ်တယ်။
4. ပလပ်စတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာ။ ဖိုင်ဘာလေဆာကိုလေဆာရောင်ခြည်ဆိုးဆေးကိုအမာခံထဲသို့ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်မှန်ဘီလူး၏အဖုံးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
က) Crystal ဖိုင်ဘာလေဆာ။ အလုပ်လုပ်သောပစ္စည်းသည်လေဆာရောင်ခြည်ဖြူဖိုက်ဘာသာဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်ပတ္တမြားတစ်မျိုးတည်းရှိသောသာမာန်ကျောက်မျက်ရတနာဖိုင်ဘာလေဆာနှင့် Nd3 +: YAG တစ်ခုတည်းကြည်လင်သည့်ဖိုင်ဘာလေဆာတို့ပါဝင်သည်။
ခ) nonlinear optical ဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်။ အဓိကအားဖြင့်လှုံ့ဆော်သော Raman ပြန့်ပွားဖိုင်ဘာလေဆာများနှင့်လှုံ့ဆော် Brillouin ပြဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်ရှိပါတယ်။
(ဂ) ရှားပါးဒြပ်ထုဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်။ fiber ကို activated လုပ်ရန်ရှားပါးဒြပ်စင်အိုင်းယွန်းနှင့် doped (Nd3 +, Er3 +, Yb3 +, Tm3 + စသည်တို့ဖြစ်သည်။ matrix သည်ဖန်ခွက်၊ zirconium fluoride ဖန်၊ single crystal) များသည် fiber laser ကိုဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်သည်။
d) ပလပ်စတစ်ဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာကိုလေဆာရောင်ခြည်ဆိုးဆေးကိုအမာခံထဲသို့ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်မှန်ဘီလူး၏အဖုံးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
(2) လိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအရ၎င်းကို F-P အခေါင်းပေါက်၊ နှစ်စဉ်အခေါင်းပေါက်၊ ကွင်းရောင်ပြန်ရောင်ခြည်ဖိုင်ဘာအခေါင်းနှင့် "8" ပုံသဏ္cာန်အခေါင်းပေါက်၊ DBR ဖိုင်ဘာလေဆာ၊ DFB ဖိုင်ဘာလေဆာနှင့်ခွဲခြားထားသည်။
(၃) ဖိုင်ဘာဖွဲ့စည်းပုံအရ၎င်းကိုတစ်လုံးတည်းသောဖိုင်ဘာလေဆာ၊ နှစ်ထပ်ပါ ၀ င်သည့်ဖိုင်ဘာလေဆာ၊ ဖိုတွန်ကြည်လင်ဖိုင်ဘာလေဆာနှင့်အထူးဖိုင်ဘာလေဆာအဖြစ်ခွဲခြားသည်။
(4) output ကိုလေဆာဝိသေသလက္ခဏာများအရ, ကစဉ်ဆက်မပြတ်ဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်များနှင့် pulsed ဖိုင်ဘာလေဆာခွဲခြားထားပါသည်။ Pulsed fiber laser ကို Q-switched fiber laser (ns pulse width ရှိ) နဲ့ mode-locked fiber laser (pulse width) ကို၎င်း၏ Pulse ဖွဲ့စည်းမှုနိယာမအရခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ps အတွက်